Tirada kenyaanka laga soo dadgureeyay Afghanistan oo korortay | Star FM
Home Wararka Kenya Tirada kenyaanka laga soo dadgureeyay Afghanistan oo korortay
Tirada kenyaanka laga soo dadgureeyay Afghanistan oo korortay
52 qof oo Kenyaan ah ayaa laga soo dadgureeyay wadanka Afghanistan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka.
12 qof oo Kenyaan ah una shaqeynayay shirkado si gaar ah loo leeyahay oo ka howlgalo gudaha dalka Afghanistan ayaa Arbacadii loo dadgureeyay magalaada Birmingham ee dalka Ingiriiska, halka ilaa 40 kale ayagana la geeyay wadanka Kazakhstan.
Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka, waxaa jira Kenyaan kale oo ka shaqeynayay laamaha ammaanka iyo shirkado gaar loo leeyahay oo aan weli la dadgurayn.
Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale xustay in xarumaha dibloomaasiyadeed ee Kenya ay sii wadayaan inay la xiriiraan muwaadiniinta kale ee ka shaqeeya gudaha dalkaasi.
Waxaa ay sidoo kale sheegtay inay jiraan saddex muwaadiniin Kenyan ah oo weli ku xanniban magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan kuwaasoo sugaya in la qaado.
Shalay ayay ahayd markii dowladda ay shaacisay inay socdaan qorshayaal lagu soo dadgureynayo muwaadiniinta dalka u dhashay ee ku xayiran Afghanistan, in kastoo aysan Kenya wadankaas u joogin howlwadeeno diblomaasiyadeed.
Previous articleQaramada midoobay oo warbixin ka soo saartay shakhsiyaad ay Taalibaan ku raadjoogto
Next articleShir ku saabsan dowlad wadaajinta oo dib loo dhigay